Taliyihii Xabsiga Jeel Ogaadeen oo lagu qabtay duleedka degmada Goldogob.
Sunday May 26, 2019 - 20:10:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya dhulka Soomaaligalbeed ee gummeysiga itoobiya kujira ayaa sheegaya in gacanta lagu dhigay mid kamida dagaal oogayaashii ugu dhibka badnaa ee xasuuqa aan kala sooca laheyn ugeysanayay dadka shacabka ah.
Xasan Axmed Ibraahim oo ku magac dheeraa 'Xasan Dheere' wuxuu ahaa taliyihii xabsiga fadeexadda ku caanbaxay ee Jeel Ogaadeen kaasi oo ahaa kawaan uu maamulkii Cabdi Ileey ku xasuuqi jiray dadka shacabka ah.
Xasan Dheere ayaa madax u ahaa maleeshiyaad manaxayaal ah oo dadka shacabka ah ku tacdiibin jiray xabsiga Jeel Ogaadeen ee dhaca duleedka magaalada Jigjiga, sanaddii 2018 hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa warbixin ay kasoo saareen xaaladda Xabsiga ku tilmaamay midka ugu sumcadda xun qaaradda Afrika ee dadka lagu tacdiibiyo.
Mas'uuliyiintii ugu sarraysay maamulka degmada Qoryooleey oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax miino.